Angifuni Ukuzwa Indaba Yakho Ebuhlungu | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 28, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Isikhathi se-rant. I-buzzword entsha kuyo yonke imithombo yezokuxhumana kanye nendawo yokumaketha okuqukethwe ithi Ukuxoxa ngezindaba. Sabelane ngama-infographics ku- ukuxoxa izindaba kuqhathaniswa nokukhuluma kwezinkampani futhi ukuxoxa izindaba… Futhi ngingumlandeli wokuxoxa izindaba. Ngezithameli ezifanele, akukho okungcono kunendaba enhle yokuxhumana nezithameli zakho.
Kepha manje sisebenzisa i- indaba ngakho konke. Izimpawu kufanele zixoxe indaba. Imikhiqizo kufanele ixoxe indaba. I-Graphics kufanele ixoxe indaba. Ama-infographics kufanele axoxe indaba. Iwebhusayithi yakho kufanele ixoxe indaba. Okuthunyelwe kwakho kwebhulogi kufanele kuxoxe indaba. Isiphakamiso kufanele sitshele indaba. Isethulo kufanele sitshele indaba.
Kwanele ngezindaba ezimbi, vele! Ukuthi nje omunye omkhulu endaweni ethile ukhulume ngokuxoxa izindaba akusho ukuthi kuyisu elifanele kuyo yonke imvelo yezokumaketha nezithameli. Kungikhumbuza indawo yesehlakalo se-Life of Brian… the Isihlangu siwuphawu!
Njengoba isicathulo singesona uphawu lukaBrian, futhi ukuxoxa izindaba akuyona impendulo kuzo zonke izinkinga zakho zokumaketha. Ngiyazi ukuthi abanye abantu bakhulekela lezi zingwazi zokumaketha… kepha thatha izeluleko zabo ngohlamvu lukasawoti. Abazi umkhiqizo wakho, imboni yakho, amanani akho entengo, ubuhle bakho nobubi bakho, futhi okuxakayo - abazi izindaba zamakhasimende akho.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - sengivele ngiyizwile indaba.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngifuna ukubhalisa ku-inthanethi.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - anginaso isikhathi sokulalela.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngidinga nje ukubona izici.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngidinga nje ukwazi izinzuzo.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngiyawazi amakhasimende akho futhi ngifuna umkhiqizo ofanayo.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngidinga nje ukubona idemo.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngidinga nje ukuyivivinya.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngidinga nje ukwazi ukuthi ingakanani.
Kwesinye isikhathi, angifuni ndaba - ngidinga nje ukuyithenga.
leticocwako Kunzima futhi kudinga ithalente langempela ukwakha isithombe ngombhalo, ezithombeni noma kuvidiyo ukuqinisekisa ukuqonda. Isikhathi, ithoni, abalingiswa… zonke izingcezu zidinga ukuba khona ukuze indaba isebenze futhi ithinte izethameli ezahlukahlukene okhuluma kuzo.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ngenze ucwaningo ngomkhiqizo ovele ukulungisa izingqinamba ebesinazo neklayenti. Ngangazi ukuthi ikhasimende likhokha malini. Ngangazi ukuthi inkinga ibabiza kangakanani. Ngangazi ukuthi ngangizimisele ukukhokha malini ukuqeda lolu daba. Isiza besingenalo lonke ulwazi oludingekayo, ngaphandle kwalokho ngingahle ngibhalise khona lapho… kepha bekufanele ngibhalisele idemo.
Ngemuva kokubhalisela idemo, ngithole ucingo lwangaphambi kokufanelekela lapho ngabuzwa khona uchungechunge lwemibuzo. Ngemuva kohlu lwemibuzo eminingi, ngikhalaze futhi ngacela nje idemo. Bekufanele ngiqede ukuphendula imibuzo. Lapho sengiqedile, ngahlela idemo. Ngemuva kosuku noma ngaphezulu, ngathola isimemo sedemo, futhi umthengisi wavula indawo yakhe yangokwezifiso eyenzelwe eyami umlingisi futhi ngaqala ukutshela i- indaba.
Ngabacela ukuthi bayeke. Wamelana.
Ngabuza ukuthi sizomenza yini lo demo, wawuvika lo mbuzo. Ngakho-ke ngamtshela ukuthi umphathi wakhe angishayele ucingo ngavala ucingo. Manje ngase ngikhungathekile. Umphathi wakhe wangishayela ucingo ngamcela ukuthi akhombise nje isoftware, echaza ukuthi uma izindleko zingaphakathi kwesabelomali sami futhi uma isoftware ilungisa inkinga, ngangikulungele ukuthenga.
Wangikhombisa idemo. Ungitshele inani. Ngenze ukuthenga.
Ekupheleni kocingo, uvumile ukuthi uzobuyela emuva ahlele kabusha inqubo yokuthengisa ukuze kuhlaliswe izinkampani ezinjengezami.
Yize ngithokozela wonke umsebenzi omangalisayo iqembu lakhe okufanele ngabe liwenzile ukuhlaziya izimo zokuwina / zokulahleka, ukuthuthukisa ama-personas, ukubhala izindaba kulabo bantu, ukusetha isu lokuqokwa kuqala bese ungondla ngendaba ebiphoqa kakhulu ukuthi ngizothenga… I angidingi futhi angifuni lutho lwayo. Bengingenaso isikhathi sendaba. Bengivele ngidinga isixazululo.
Ungakuthathi ngendlela okungesiyo, izindaba zinendawo yazo kwezentengiso. Kepha Ukuxoxa ngezindaba akuyona i-panacea yamasu wokumaketha. Abanye babavakashi besiza sakho abayifuni indaba… futhi bangakhungatheka futhi bacishwe yiyo. Banikeze ezinye izinketho.
Manje njengoba i-rant isiphelile, lena yindaba enhle kabi ongafuna ukuyifunda… umngani wami (neklayenti), UMuhammad Yasin noRyan Brock bheka umlando omude wabantu abatshela indaba efanele ngesikhathi esifanele. Funda lapho behlola umhlaba wezokuxhumana esikhathini sedijithali bese ubheka kokudlule ukuze ufunde ukuthi uma kukhulunywa ngobuciko bokuxoxa izindaba, kukhona akukho okusha phansi kwelanga.
Thatha ikhophi ye- Akukho Okusha: Umlando Ongahloniphi Wokuxoxa Izindaba kanye Nenhlalo Yezindaba.
Buka Izivakashi Zibhekabheka, Hlola, Thenga Ngesikhathi Sangempela!
Aug 28, 2012 ku-11: 34 AM
I-chapeau enkulu enkulu enkulu.
Futhi ngokungenza ngihleke ikhanda lami kulokhu.
Aug 29, 2012 ku-11: 42 AM
Ngiyabonga @ twitter-16882886: disqus!
Aug 29, 2012 ku-3: 18 AM
UDouglas, indlela engcono yokuchaza ukwazisa kwami ​​ngale ndatshana yindaba encane. Ngesinye isikhathi ngangisebenzisa i-Twitter ngibona lesi sihloko esingajwayelekile, “Angifuni Ukuzwa Indaba Yakho Edelelekile. Ngakho-ke ngafunda lesi sihloko futhi ngahleka. Futhi ngahlala kamnandi njalo.
Aug 29, 2012 ku-11: 41 AM
@AstroGremlin: disqus yaziswa kakhulu! 🙂
Aug 29, 2012 ku-4: 51 AM
Izindaba zimnandi, kepha futhi sisezweni lokulunywa kwemisindo nezinhlamvu eziyi-140. Izinketho zamathrekhi amaningi ziyasiza. Okuthunyelwe kwami ​​kwebhulogi kwakamuva okuphefumulelwe opopayi bakaRupert Bear, okunesithombe, inkondlo neprose, kusebenze kahle nezingane zami. Amakhasi wokufika kwamakhophi amade, isibonelo, alungele i-SEO nabanye abafundi, kepha ividiyo nenkinobho yokuqala 'yokuthenga-manje / yesinyathelo esilandelayo' inikela ngezinye izindlela zokuhamba.
Aug 29, 2012 ku-11: 43 AM
@markstonham: disqus Ngisayithanda ikhophi ende… kepha njengoba usho, izinketho ziyasiza. Ngiyabonga!
Kuyamangalisa ukuthi wonke umuntu ubonakala enenkolo yokuxoxa izindaba.
Esikhundleni sokuxoxa indaba, kunokuthile okufanele kushiwo ngokusebenzisa amasu okuxoxa izindaba ekuxhumaneni kwebhizinisi.
Uma usika lokhu ekugcineni, kumayelana nokusebenzisa ulimi ukuthola ukunakwa komuntu noma okungcono kodwa okuthathekisayo. Ngokusobala, ukuxhumana okuwela ku-quadrant engathandeki kuveza ukusabela ngakolunye uhlangothi lobubanzi.
Ngingasho ukuthi isihloko sakho sisebenzisa inqubo yokuxoxa izindaba ngokuthatha isikhundla senkontileka.